FA Oo Ganaaxday Mourinho, Ramires Iyo Rui Faria
HomeEnglandFA Oo Ganaaxday Mourinho, Ramires Iyo Rui Faria
Xidhiidhka kubada cagta Ingiriiska ee FA ayaa ganaax dul dhigay tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho, caawiyihiisa Rui Faria laacibka khadka dhexe kooxda uga ciyaara ee Ramires kadib falal kala duwan oo ay sameeyeen kulankii Chelsea guuldarada 2-1 ka ahi ka soo gaadhay kooxda Sunderland Sabtidii aynu soo dhaafnay.
Tababare Mourinho ayaa xukunkiisa loo cuskaday ‘talaabo anshaxa ka baxsan ‘ kadib markii ciyaartu dhamaatay oo uu shirkiisii jaraaid, hambalyo u diray garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay ee Mike Dean iyo gudoomiyaha guud ee garsoorka Ingiriiska Mike Riley.
“Hambalyo ayaan u dirayaa Mike Dean maxaa yeelay wuxuu sameeyey Bandhig aad u heersareeya.” ayuu si jees jees ah u yidhi , tababaraha Boortaqiiska ahi shir jaar’id oo uu qabtay ciyaarta kadib.
Hadalkaas ayaa loo fasiray mid ka baxsan anshaxa iyo hab dhaqanka xeerka u yaala ciyaaraha, waxaanu sababay in xukun lagu rido tababaraha hadalkiisu inta badan muranka dhaliyo.
Caawiyihiisa Faria, ayaa isna ka cadhooday goolkii labaad ee Sunderland oo rigoodhe ahaa , kadibna buuq abuuray , isagana waxa xukunkiisa loo cuskaday laba arimood , Tan koowaad , aflagaado uu geystay iyo Mida labaad oo ah hab dhaqan xun oo uu soo bandhigay.
Halka ciyaaryahan Ramires xukunkiisu salka ku hayay, xaalad abuur iyo dhirbaaxo uu wejiga kaga dhuftay ciyaartoygii ka soo horjeeday mid kamid ah , taas oo casaan uu ku mutaystay laakiin loo raaciyey Afar kulan oo ganaax ah. xukunka laacibka reer Brazil ayaa ka dhigaya inay sidaas ku dhamaatay xili ciyaareedkii Ramires.
Ka sokow Ramires oo la iclaamiyey xukunkiisa , Tababare Mourinho iyo caawiye Faria , ayaa xukunka ay mutaysteen la soo saari doonaa Isniinta Dambe.
Cajiib: Koox Gubtay Isla Garoonkeedii…! – (Maxaa Ku Kelifay..?)
20/05/2016 Samatar Mohamed
Ribery Oo Koobka Aduunka Ka Hadhay & Schneiderlin Oo Xulka France Lagu Soo Daray